SA and Zim share a world of realpolitik - NewZimbabwe.com SA and Zim share a world of realpolitik - NewZimbabwe.com
South Africa needs to protect these interests and Mugabe’s Zanu-PF can be trusted to provide a cover – purely in a business sense. Already South Africa and Zimbabwe have about 40 cooperation agreements in various areas. South Africa is looking long term – and this is to well after President Mugabe.Advertisement
South Africa has paid off Zimbabwe with great political support – even at the level of the United Nations – and has also given a welcome fillip to Zimbabweans seeking greener pastures in the country. Just last month, South Africa extended a dispensation for special permits for Zimbabweans which will allow Zimbabwean immigrants some four more years or so.
Mugabe summed up the complex relationship with South Africa when he said: “We are one family because of geography, history, the revolutionary struggle we fought side by side and, of course, because of culture, blood totems and marriage We are one – one people, one revolution, one struggle, one future.” It will not be easy to break these bonds. And it is rather too much to expect the ANC to break with history and ideology and warm to Zimbabwe’s opposition.